မြင်းစီးပြီးတော့ လား… | မိုးစက်မှော်
Filed under: ခရီးသွား, အတွေ့အကြုံ —2Comments	07/09/2010
အခုတော့ မြင်းသေချာ စီးဖူးသွားပြီချောင်းသာကမ်းခြေ ရောက်တုန်း ကလည်း မြင်းစီး ဖူးပေမယ့် အသွား အပြန်လား (၅ မိနစ် လောက်) စီးဖူးတာဆိုတော့… စီးပြီးမှတောင် မြန်မာ့ မြင်းပိန်လေး ကို သနားမိ နေပါ သေးတယ်။ မြင်းကတော့ တကယ့်ကို အားရပါးရ စီးချင် နေမိတာ… စိတ်အာသာ ဖြစ်နေခဲ့ တာပေါ့။ အခုတော့ စီးရပြီ။
မြင်းပြီးတော့ လားစစ်ဘုရင်တွေဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ရဲဘော် ရဲဘက် မြင်းတွေကို အကြီး အကျယ် တန်ဖိုးထား၊ ချီးမြှင့် မြှောက်စား ခဲ့ကြ ပါတယ်။ တခါ အမေရိကကို မြင်းတွေ ရောက်လာပြီး နောက်မှာ လည်း နွားကျောင်းသား တွေက ကောင်းကောင်း အသုံးချခဲ့လို့ ကောင်းဘွိုင် တွေတောင် ပေါ်ခဲ့သေး တယ်လေ။ နာမည်ကြီး ကောင်းဘွိုင် ရုပ်ရှင်ကား တွေလည်း ရိုက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
မြင်းစီးဦးထုပ်တွေ ကြိုက်ရာရွေး၃ နာရီ မထိုးခင် ငါးမိနစ် အလိုမှာ မြင်းဇောင်းနဲ့ ရုံးခန်းဘက် ထွက်လာတော့ Charlotte ရှားလော့ နဲ့ တွေ့ရ ပါတယ်။ မင်းမှာ ဦးထုပ်နဲ့ လည်ရှည်ဘွတ် ပါလား ဆိုတော့ ကျွန်တော်က မပါဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ အခါ အခန်း တစ်ခုထဲ ခေါ်သွား ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်နဲ့ တော်လောက်မယ့် ဦးထုပ်နဲ့ လည်ရှည်ဘွတ် တစ်ခုကို ရွေးပေး ပါတယ်။ ကွက်တိ ပါပဲ၊ ဒါဟာ ရှားလော့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက် နေတာကို ပြတာ ပါပဲ။ အသက် ကတော့ ကိုယ့်အောက် ငယ်လောက် ပါတယ်။ ရှားလော့ ဆိုတာလည်း ကောင်မလေးပါပဲ။ ဒီမြင်းခြံမှာ သတိထားမိတာတစ်ခုကတော့ ခြံပိုင်ရှင်ကြီး မက်ဂီကိုယ်တိုင်နဲ့ မြင်းခြံအတွင်း အလုပ်လုပ်နေသူ အားလုံးနီးပါးဟာ မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်နေတာပါပဲ။ မြင်းတွေကို မိန်းကလေးတွေက ပိုချစ်တာလား၊ မြင်းစီးတာကို မိန်းကလေးတွေက ပိုကြိုက်ကြသလားတော့ မသိပါဘူး။
လည်ရှည်ဘွတ်တစ်ခု တော်တာယူဦးထုပ်နဲ့ ဖိနပ် စီးပြီးတော့ မြင်းရွေးတဲ့ အခါ ရှားလော့ ကပဲ မြင်း တစ်ကောင် ဆွဲလာ ပါတယ်။ Hippo ဟစ်ပိုလို့ ခေါ်တဲ့ မြင်း တစ်ကောင်ပါ၊ အနက်ရောင် သန်းတဲ့ အုန်းခွံ ရောင်ပါ။ မြင်းမြီး ကလည်း အရှည်ကြီးနဲ့ပါ။ မြင်းကြီးက အထီးဖြစ်ပြီး တော်တော် လှပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဂျင်းဘောင်ဘီက လည်ရှည်ဖိနပ်ပေါ် ရောက်နေတာတွေ့တဲ့ ရှားလော့က ဘောင်းဘီအောက်ဘက် အစတွေကို ဖိနပ်ထဲ သွင်းလိုက်ဖို့ ပြောပါတယ်။ နောက်တော့ လှေခါးသုံးဆင့်လုပ်ထားတဲ့ သံလှေကားပေါ် တက်ခိုင်းပြီး မြင်းကို ဆွဲလာပါတယ်။
ပိုနီ(မြင်းပု)လေးနဲ့ ကလေးလေးရယ်၊ အသင်အပြကောင်းတဲ့ ရှားလော့ရယ်၊ နောက်ကျောဘက်မှာ မြင်နိုင်တဲ့ သုံးဆင့် တက်ရတဲ့ သံလှေကားလေးရယ်ကျွန်တော်က Beginner အခုမှ မြင်းစ စီးမယ့်သူ ဖြစ်လေတော့ မြင်းပေါ်ကို မြေပြင် ပေါ်ကနေ မတက်ခိုင်း ပါဘူး၊ မြင်းတွေ ကလည်း အရပ်မြင့် တာလည်း ပါပါတယ်။ လှေကားပေါ် ကနေပဲ မြင်းပေါ် တက်ရ ပါတယ်။ ကုန်းနှီးပေါ် အကျအန ထိုင်ခိုင်း၊ ခြေထည့် ရမယ့် သံကွင်း ထဲကို ခြေထောက်ကို သေချာ ထည့်ခိုင်း၊ နေသား တကျ ထိုင်လို့ အဆင်ပြေ မပြေ မေးပါတယ်။
ကျွန်တော်ပထမဆုံး စီးရတဲ့ မြင်းကြီး ဟစ်ပိုမြင်းက အဲဒီလို ပြေးချိန်မှာ လူက မြင်းပေါ် မှာ ထိုင်လိုက် ထလိုက် အသားကျ လုပ်နေ ရတယ်။ ထတယ် ဆိုတာက သံခြေနင်း ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ခြေထောက်ကို အားပြုပြီး ထရတယ်၊ ထိုင်တဲ့ အခါ မြင်းကုန်းနှီး ပေါ်ကို မြင်းမနာ အောင် ထိုင်ရ တယ်။ မြင်းဇက် ကိုလည်း တုံ့သလို မဖြစ်အောင် ဆွဲထားရတယ်။ မြင်း ဆက်ပြေး နေအောင်လည်း မြင်းဝမ်းဗိုက် ကို ဘွတ်နဲ့ ကန်ပေး (ပုတ်ပေး) နေရတယ်။ အားလုံး အဆင် ပြေပြေ လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ တကယ် မလွယ်ပါဘူး။
ဟစ်ပိုကြီးက ပျင်းပေမယ့် မြင်းလိမ္မာကြီးတစ်ကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က မြင်းတွေကို လူတွေလိုပဲ he/she နာမ်စားတွေနဲ့ ပြောတယ်။ good boy/ good girl လို့ ခေါ်တယ်။ မြင်းကြီးတွေက အရွယ်အစားမှာ မြန်မာမြင်းတွေထက် ကြီးပေမယ့် သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း နားထောင်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ သုံးခါလောက် အကြော့ပြေးပြီးချိန်မှာပဲ တစ်နာရီသင်ခန်းစာပြီးတယ်။ i’m impressed you. လို့ ရှားလော့က ပြောပါတယ်။ အရင် မြင်းစီးဖူးတယ်မို့လားလို့လည်း ထပ်မေးပါတယ်။ သေချာမစီးဖူးပါဘူးဗျာလို့ ကျွန်တော်က ပြန်ပြောရပါတယ်။
မြင်းစာအုပ်ဖတ်လိုက်သေးတယ်တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ မြင်းစီးဖို့ မလာခင်က youtube ကနေ မြင်းစီး အခြေခံ တွေကို ကြည့်ခဲ့ တယ်။ ပြီးတော့ နေ့လယ်စာ စားတုန်း မှာပဲ မက်ဂီ ဧည့်ခန်း ထဲက မြင်းစီး အခြေခံ စာအုပ်ကို လှန်လှော ကြည့်ဖြစ်တယ်၊ ဖတ်ကြည့်တယ်။
မြင်းတစ်ကောင်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းနဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေမြင်းစီး အခြေခံဆိုရင် မြင်း တစ်ကောင် လုံးရဲ့ အခေါ် အဝေါ်တွေ၊ မြင်း ကုန်းနှီးရဲ့ အခေါ် အဝေါ်တွေ သိအောင်၊ မှတ်မိအောင် လုပ်ရမယ်။ နောက် မြင်း လမ်းလျှောက် (walk)၊ မြင်း အကြော့ပြေး (trot)၊ မြင်း ကဆုန်ပေါက် (canter) နဲ့ မြင်း ဒုန်းစီး (gallop) တွေ သိရတာ ပေါ့လေ။ ရှားလော့ ကတော့ မင်းရဲ့ မြင်းစီးချိန် လေးချိန် လောက်နဲ့ ဆိုရင် walk နဲ့ trot ပဲ ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့က စနစ် တကျကို အဲဒီလို လုပ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ မြင်းကဆုန်ပေါက် (canter) ဆိုတာက ရှေ့ခြေနှစ်ချောင်းယက် နောက်ခြေနှစ်ချောင်းယက်ပြီး ခုန်တာမျိုးပါ။ ဒုန်းပြေးဖို့အတွက် ပထမအဆင့်ပါ။ ကဆုန်ပေါက်ကို အရှိန်နဲ့ ပြေးလိုက်ရင်တော့ ဒုန်းစိုင်း (gallop) ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။
မြင်းတက် မြင်းဆင်း မြင်းထွက် မြင်းရပ်ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် တစ်ခု သတိ ထားမိ တာက မြန်မာပြည်က ရုပ်ရှင် မင်းသားတွေ ထဲမှာလည်း တချို့ မြင်းစီး ကောင်းတဲ့ သူတွေ ရှိတယ် ဆိုတာပါ၊ သူတို့ ဘယ်လို လေ့ကျင့် ထားကြ သလဲတော့ မသိပါဘူး။ တော်တော်တော့ ချီးကျူး ရမှာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ရှားလော့ အပြောအရ ဆိုရင် ကျွန်တော် စီးချင်တဲ့ ဒုန်းစီး နိုင်ဖို့ ဆိုတာ နေ့တိုင်း လေ့ကျင့် ရင်တောင် အမြန်ဆုံး ၆ လ၊ ပုံမှန် တစ်နှစ်တော့ အချိန်ယူ လေ့ကျင့် ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်က လေးညှို့က ပစ်လွှတ် လိုက်တဲ့ မြား တစ်စင်းလို မြင်းစီး ချင်တာ ကိုးဗျ။
လမ်းလျှောက် အကြော့စီး ကဆုန်ပေါက် ဒုန်းစီး အဆင့်ဆင့်လေ့ကျင့်ကွင်းမှာ မြင်းစီး ပြီးတော့ မြင်းဇောင်း ကို ပြန်လာ ခဲ့တယ်၊ ရှားလော့ ကပဲ ဟစ်ပို ကို ပြန်ဆွဲ လာပေး တာပါ၊ ကျွန်တော် ကတော့ မြင်းပေါ် ထိုင်လိုက် လာရုံ ပါပဲ။ ရှားလော့က မြင်းကို ကုန်းနှီး ဖြုတ်တယ်၊ တခြား မြင်း သုံးကောင် နဲ့ ထပ်ပေါင်း လိုက်ပြီး စုစုပေါင်း မြင်း လေးကောင် ကို နောက် ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ အတူ တစ်ယောက် နှစ်ကောင် ဆွဲပြီး မြင်းကွင်း ထဲမှာ သွားထား လိုက်တာ တွေ့တယ်။ မြင်းတချို့ ကိုတော့ ညဘက် အအေးဒဏ် ခံနိုင်အောင် အပေါ် ကနေ နွေးစေမယ့် အ၀တ် (rug) လွှမ်းပေး ထားတာ တွေ့ရတယ်။ တာဝန်ပြီးလို့ အေးအေးသက်သာ ဖြစ်သွားတဲ့ ဟစ်ပိုကြီးဒါနဲ့ ကျွန်တော် လိုက်သွားပြီး မေးကြည့်တယ်။ ဘာလို့ မြင်းတွေ ကို အ၀တ် လွှမ်းတဲ့ အကောင် လွှမ်း၊ ဒီအတိုင်း ထားတဲ့ အကောင် ထား လုပ်သလဲပေါ့။ ကျွန်တော် စီးခဲ့တဲ့ မြင်း ဟစ်ပိုကြီး ကတော့ အသက်ကြီး နေလို့ ခံနိုင်ရည် ရှိနေပြီတဲ့။ ရှားလော့က ပြောပြတယ်။ ဟစ်ပိုကြီးကို ဘာမှ မလွှမ်း ပေးဘဲ ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေး လိုက်တော့ စိတ်အေး လက်အေး မြက်တွေ ကုန်းစား နေပါ တော့တယ်။ အအေးဒဏ် ခံနိုင်ရည် မရှိသေးတဲ့ မြင်းတွေကို အဲဒီလို ခြုံစောင် မလွှမ်းပေး ထားရင် မြင်းတွေ စားထားတဲ့ အစားအစာ ကနေ စွမ်းအင်တွေ ဖြုန်းတီးရာ ရောက်ပြီး မြင်းတွေ ပိန်သွား မယ်လို့ ရှားလော့က ကျွန်တော့် ကို ရှင်းပြပါတယ်။
အအေးဒဏ်ခံနိုင်ဖို့ rug ခြုံထားတဲ့ မြင်းတွေဒီမှာ တစ်ခု စိတ်ဝင် စားဖို့ ကောင်းတာ က သူတို့ဆီ အပန်းဖြေ မြင်းလာ စီးတာ ဖြစ်ပေမယ့် မြင်းစီးပြီး ပြီးရော မဟုတ်ပါဘူး၊ မြင်းတွေ အကြောင်း မေးရင် ရှင်းပြ သလို အခန်းထဲ အနား မနေ ချင်လို့ မြင်း သန့်ရှင်းရေး၊ မြင်းဇောင်း သန့်ရှင်းရေး၊ မြင်းတွေကို ကွင်းထဲ လှန်ထားဖို့ စတာတွေ မှာပါ ပါဝင် ကူညီ နိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
မြင်းစီးပြီးရင်လည်း ကုန်းနှီးကို ကိုယ့်ဘာသာဖြုတ်ခိုင်းပြီး သွားထားခိုင်းပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် မြင်းစီးပြီးတဲ့အခါမှာ ခိုင်းတာပါ။ ကျွန်တော်က ပထမ ကြောင်သွား၊ အံ့သြသွားပေမယ့် ဒါဟာ မြင်းအကြောင်းကို ပိုသိလာအောင်၊ မြင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးအောင် သူတို့ လုပ်တာပဲလို့ တွေးမိသွားပါတယ်။ နာမည်နဲ့ သူ့နေရာနဲ့သူ ထားရတဲ့ မြင်းကုန်းနှီးတွေဒုတိယ အခေါက် ဟစ်ပိုကြီး ကို စီးပြီးတော့ ကုန်းနှီး ဖြုတ်လိုက်တဲ့ အခါ ကုန်းနှီး တစ်ခုလုံး ချွေးတွေ ရွှဲနေတာ ကို သတိပြုမိ ပါတယ်။ ကျွန်တော် သာ သူ့ပေါ်မှာ သက်သောင့် သက်သာလေး စီးနေခဲ့တာကိုး၊ သူ့ကတော့ အောက်ကနေ ကျွန်တော် လုပ်သမျှ ခိုင်းသမျှ ခံနေရပြီး ချွေးတွေ တောင်မှ ရွှဲနေမှ ကိုးလို့ သနား စိတ်လေး ၀င်မိပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မှာပဲ ကျွန်တော် စီးမယ့်မြင်းကို မြင်းဇောင်းကနေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆွဲထုတ်ဖို့ ပြောခံရပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် မြင်းစီးတဲ့ လေးချိန်အတွင်း မြင်းနှစ်ကောင် စီးခဲ့ရတာမှာ ဟစ်ပိုအပြင် တခြား စီးတဲ့မြင်းကတော့ Murphy မာဖီပါ။ အဖြူရောင်နဲ့ အနက်ရောင် နည်းနည်းပါးတဲ့ မြင်းကြီးပါပဲ။ မာဖီကြီးကို ဆွဲထုတ်ခိုင်းတော့ ကျွန်တော့်မှာ လန့်ရတယ်ကျွန်တော့်ကို မြင်းဇောင်း ကနေ မြင်းကြီးကို ဆွဲထုတ် ခိုင်းတော့ လန့်တာ ပေါ့လေ။ နည်းတဲ့ အကောင်ကြီး မဟုတ်ဘူး၊ တစ်ချက် ကစ်လိုက်ရင် တစ်ဘ၀စာ အီစိမ့် သွားမှာမို့ ကြောက် ကြောက်နဲ့ ဆွဲထုတ်တာ မြင်းက ပါမလာ ပါဘူး။ မြင်း ဖင်ဘက် ကနေ လက်နဲ့ ပုတ်ပုတ်ပြီး အသာလေး ချော့ဆွဲ နေတာကိုး။
မက်ဂီက မြေ၊ မြင်းအပြင် ယာဉ်တွေလည်း ပိုင်သေးတယ်မြေဧက ၄၀၀ ပိုင်တဲ့ မက်ဂီဟာ မြင်းလည်း အစီး ၁၀၀ ကျော် ပိုင်တယ် လို့ သိရတော့ သူ့ကို မြင်းရာ စီးရှင် မက်ဂီ လို့တောင် ခေါ်ရ မလိုပါပဲ။ ဒါနဲ့ သူ့ကို “မက်ဂီ… ခင်ဗျားက အင်္ဂလန်မှာ အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီး ကြီးတွေ ထဲက တစ်ယောက်ပေါ့“ လို့ ပြန်ခါနီး မေးကြည့်တော့… မက်ဂီက“အင်း… ငါ့ထက် ချမ်းသာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အင်္ဂလန်မှာ အများကြီး ရှိပါတယ်ကွာ၊ အေး… မင်းမေးတာကို ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ ငါဟာ assets (မြေနဲ့မြင်း ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ တွက်ရင်တော့) ချမ်းသာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ ငါ့မှာ ၀န်ထမ်းတွေ လစာပေးဖို့နဲ့ ရေ၊ မီး၊ တယ်လီဖုန်း စတဲ့ အခွန်အခတွေ ပေးဖို့တောင် မနည်းရုန်းကန် နေရပါတယ်“လုိ့ ပြန်ဖြေလာတော့ မြန်မာပြည်သားလေး ကျွန်တော့်မှာ သူ့ပဲ သနားရမလိုတောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။
မြင်းကျွမ်းတဲ့ သြစတြေးလျသူလေး ဂျက်စမင်းရောက်စနေ့ ကတော့ မြင်းစီး သင်ခန်းစာ တစ်နာရီ တစ်ချိန်နဲ့ပဲ ပြီးပါတယ်။ ကျန်တာက ကိုယ့် ဘာသာ စပ်စု နေတာပါ။ ဦးထုပ်နဲ့ ဖိနပ် ပြန်ပေးဖို့ လုပ်တော့ မင်း ယူထားလေ တဲ့၊ မနက်ဖြန်တွေ ဆက်စီးဦးမှာ မဟုတ်လားလို့ ရှားလော့က ပြောပါတယ်။
မြင်းတွေလည်း အချိန်မှန် လုပ်၊ စား၊ နားဒါနဲ့ မြန်မြန် ကိုယ်လက် နွေးအောင် သုတ်၊ အ၀တ် အစားလေး လဲပြီး ဘုရား ရှိခိုး ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ဘီဘီစီ သတင်း ခဏ ဖွင့်ကြည့် ဖြစ်ပါတယ်။ တအောင့် နေတော့ ငါ ခဏတော့ လှဲမှ ဆိုပြီး လှဲဖြစ် ပါတယ်။ တစ်နာရီ မြင်းစီး ထားပေမယ့် ရေနွေး ပူပူနဲ့ စိမ်လိုက်တာရယ်၊ အကြောအချင် ပြေအောင် ဆန့်ဆန့် ရန့်ရန့် အိပ်လိုက်တာ ရယ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပျော့ပျော့ ပျောင်းပျောင်း ဖြစ်နေ ပါတယ်။
07/09/2010 at 2:56 pm	မြင်းစီးအတွေ့အကြုံတွေ
မြင်းကိုမြင်းခြံထဲက ကိုယ့်ဖာသာ ဆွဲထုတ်ရတယ်ဆိုတာတော့
07/09/2010 at 3:17 pm	တကယ်သေချာဖတ်ကြည့်တော့ မြင်းစီးရတာမလွယ်ဘူးနော်၊
မြင်း လမ်းလျှောက် (walk)၊ မြင်း အကြော့ပြေး (trot)၊ မြင်း ကဆုန်ပေါက် (canter) နဲ့ မြင်း ဒုန်းစီး (gallop) တွေ သိရတာစိတ်ဝင်စားးဖို့ကောင်းလိုက်တာ၊ မြင်းချွေးထွက်တယ်ဆိုလို့ သနားတောင်သနားသွားတယ်၊
နောက်အပိုင်းကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်၊ ဘရာဗို !
ကျွန်တော် တန်းလန်း »